2 IziKronike 13:1-22
13 Kwakuwunyaka weshumi nesishiyagalombili weNkosi uJerobowamu lapho u-Abhiya eqala ukubusa phezu kukaJuda.+ 2 Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema, igama likanina kwakunguMikhaya+ indodakazi ka-Uriyeli waseGibheya.+ Kwaba khona impi phakathi kuka-Abhiya noJerobowamu.+ 3 Ngakho u-Abhiya walwa enebutho lempi lamadoda empi anamandla ayizinkulungwane ezingamakhulu amane,+ amadoda akhethiweyo. UJerobowamu yena wahlelekela impi ukuze alwe naye enamadoda akhethiweyo ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, amadoda angamaqhawe, anamandla.+ 4 Manje u-Abhiya wasukuma phezu kweNtaba iZemarayimi, esesifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi,+ wathi: “Ngizwe, Jerobowamu no-Israyeli wonke. 5 Akukhona yini okwenu ukwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngokwakhe wanika uDavide umbuso+ phezu kuka-Israyeli kuze kube nini nanini,+ yena namadodana akhe,+ ngesivumelwano sikasawoti?+ 6 UJerobowamu+ indodana kaNebhati, inceku+ kaSolomoni indodana kaDavide, wavuka futhi wadlubulunda+ enkosini yakhe.+ 7 Futhi amadoda angomahlalela,+ abafo abangelusizo lwalutho,+ aqhubeka eqoqana ngakuye. Ekugcineni baba namandla ngaphezu kukaRehobowamu indodana kaSolomoni, lapho uRehobowamu+ emncane futhi enengebhe,+ futhi akakwazanga ukumelana nabo. 8 “Manje nina madoda nicabanga ukumelana nombuso kaJehova esandleni samadodana kaDavide,+ niyisixuku esikhulu+ futhi kukhona kanye nani amathole egolide uJerobowamu anenzele wona ukuba abe ngonkulunkulu.+ 9 Anizange yini nixoshe abapristi bakaJehova,+ amadodana ka-Aroni, namaLevi, futhi aniqhubeki yini nizenzela abapristi njengezizwe zala mazwe?+ Noma ubani oweza futhi wagcwalisa isandla sakhe ngamandla ngethole leduna nezinqama eziyisikhombisa, waba umpristi walokho okungebona onkulunkulu.+ 10 Thina, uJehova unguNkulunkulu wethu,+ asizange simshiye; futhi abapristi bayamkhonza uJehova, amadodana ka-Aroni, namaLevi asemsebenzini.+ 11 Bathunqisela uJehova iminikelo yokushiswa ekuseni njalo nakusihlwa njalo+ kanye nempepho enamakha;+ futhi izinhla zesinkwa zisetafuleni legolide elihlanzekile,+ kukhona uthi lwesibani lwegolide+ nezibani zalo ukuze zikhanyise njalo kusihlwa;+ ngoba sigcina isibopho+ kuJehova uNkulunkulu wethu, kodwa nina nimshiyile.+ 12 Futhi, bheka! thina sinoNkulunkulu weqiniso phambi kwethu+ kanye nabapristi bakhe+ namacilongo awuphawu+ okuzwakalisa inhlabamkhosi yempi ngokumelene nani. O bantwana bakwa-Israyeli, ningalwi noJehova uNkulunkulu wokhokho benu,+ ngoba ngeke niphumelele.”+ 13 UJerobowamu yena, wathumela abaqamekeli ukuba bazungeze beze ngemva kwabo, kangangokuba bona baba ngaphambi kukaJuda abaqamekeli baba ngemva kwabo.+ 14 Lapho abakwaJuda bephenduka, bheka, impi yayingaphambi nangemuva kwabo.+ Baqala ukukhala kuJehova,+ kuyilapho abapristi beshaya amacilongo kakhulu. 15 Amadoda akwaJuda aqhumuka ekhamuluka ngokukhamuluka kwempi.+ Kwathi lapho amadoda akwaJuda ekhamuluka ngokukhamuluka kwempi, uNkulunkulu weqiniso wamhlula+ uJerobowamu no-Israyeli wonke phambi kuka-Abhiya+ noJuda. 16 Abantwana bakwa-Israyeli babaleka phambi kukaJuda, khona-ke uNkulunkulu wabanikela esandleni sakhe.+ 17 U-Abhiya nabantu bakhe bababulala ngokuceka okukhulu; futhi ababuleweyo bakwa-Israyeli baqhubeka bewa, amadoda akhethiweyo ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. 18 Kanjalo abantwana bakwa-Israyeli bathotshiswa ngaleso sikhathi, kodwa abantwana bakwaJuda baba namandla ngoba babencike+ kuJehova uNkulunkulu wokhokho babo. 19 U-Abhiya waqhubeka emjaha uJerobowamu wathumba imizi kuye, iBhethele+ nemizana yalo engaphansi, neJeshana nemizana yalo engaphansi, ne-Efrayini nemizana yalo engaphansi.+ 20 UJerobowamu akabange esaba namandla+ ezinsukwini zika-Abhiya; kodwa uJehova wamshaya,+ wafa. 21 U-Abhiya waqhubeka eziqinisa.+ Ngokuhamba kwesikhathi waba nabafazi abayishumi nane,+ futhi wazala amadodana angamashumi amabili nambili+ namadodakazi ayishumi nesithupha. 22 Zonke ezinye izindaba zika-Abhiya, yebo izindlela zakhe namazwi akhe, zilotshwe esichasiselweni somprofethi u-Ido.+